Home Wararka Aqoondarrida Madaxdeenna iyo Heerka ay Dunida Joogto
Aqoondarrida Madaxdeenna iyo Heerka ay Dunida Joogto
Weerarka afeed gudoomiyaha Barlamanka ay u geystay guddoomiye ku xigeenka koowaad Muudey waa doqnimo qofeed, aqoondarri sharciyeed iyo u qalmid la’aan xileed. Shalay Muudey isaga ayaa been la ordayey markii Jawaari la riday maantana isagaa been la ordaya.
Dunida goddomiyaha Barlamaka oo xataa shaki la geliyaa dhexdhexaadnimadiisa waxaa lagu waayaa xubinimada golaha, waana la isaga digaa. Tusaale dalka Boqortooyada Ingiriiska waxaa lagu tilmaamaa inay tahay dalalka aduunka ugu horreeya ixukummida xorta ah ee shacbiga waxa loo yaqaanno Demoqraadiyadda, waxaana si aan cadi ahayn loo ilaaliyaa sharafta iyo hay’abadda guddoomiyaha Barlamanka.
Haddaba xubin barlamanka ka tirsan ayaa su’aal ka keentay ayaa la yiri dalkaas gudoomiyaha golaha la soo doorto ee shacbiga ee loo yaqaan House of Commons.
Haddaba MOL waxay idiin soo bandhigeysaa laba qoraal oo ay kala sameyeen shakhsiyaad ka kala tirsan labada shacbi ee Ingiriiska iyo Somaliya oo arrintaan ku saabsan si dadkau ay u koraan una fahmaan sida dalka loo ilaasahado oo waliba aan madaxda ama shakhsiyaadka lga ogolaan inay xeerarka iyo shuruucda jebiyaan sida MW Farmajo iyo RW Kheyre.
Hlkaan ka eego labada qoraal,
Previous articleMusharaxiinta isbedel doonka KG oo walaac ka muujiyay amniga Baydhabo (War Saxaafadeed)
Next articleSafarka Kheyre ee Qatar waa Maxaa iga Galay Haddii uu dalku Gubanayo waan soo Dalxiisayaa.
Howlgalka Atlanta oo 10-sano jirsaday
RW Kheyre oo ku amray Axmed Maxamud Baasto in uu hambalyeeyo...